Istaraatiijiyad Kasta Mawduuc Uma Baahan Sheeko | Martech Zone
Istaraatiijiyad Kasta oo Mawduuc ah uma baahna sheeko
Arbacada, Janaayo 10, 2018 Isniin, Janaayo 15, 2018 Douglas Karr
Sheekooyinku meel walba way yaalaan waana ku xanuunsanahay. Barnaamij kasta oo ka mid ah baraha bulshada ayaa isku dayaya inuu wejigayga ku tuuro, degel walbana wuxuu isku dayayaa inuu igu soo jiito sheekadooda riix riix, haddase nooc walba wuxuu doonayaa inuu shucuur ahaan ila soo xiriir khadka tooska ah. Fadlan ka dhig inay joojiso.
Sababaha Aan Ugu Daallay Sheekooyinka:
Dadka badankood waa laga cabsado sheekooyinka.
Dadka badankood maahan raadinaya sheekooyin. Qiiq!
Waan ogahay inaan ka careysiin doono xirfadleyda mawduucyada halkaas jooga ee jecel inay gabyaan, dhisaan xaqiiqda, ayna soo qabtaan shucuurta daawadayaashooda, dhagaystayaashooda, ama akhristayaashooda.
Ma jiraan wax ka fiican sheeko weyn oo uu sheegay sheeko-yaqaan sare. Laakiin helitaanka sheeko weyn ama sheekeeye weyn oo aad u sheegto waa arrin dhif ah. Sheeko-yahanno waaweyn ayaa tilmaamaya faa iidooyinka sheeko-xariifnimada weyn maxaa yeelay waa ganacsigooda!
Taasi ma noqon karto aad ganacsi.
Google waxay sameysay tan cilmi baaris ah oo ku saabsan waxa dadka ku dhiirrigeliyey inay tallaabo ka qaadaan internetka, iyagoo ku degaya 4 daqiiqado kala duwan halkaas oo ganacsiyada iyo macaamiisha ay tallaabo ka qaadeen.
waxaan rabaa inaan ogaado daqiiqado
Waxaan rabaa inaan tago daqiiqado
Waxaan rabaa inaan sameeyo daqiiqado
Waxaan rabaa inaan iibsado daqiiqado
Dabcan, haddii iibsade uu haysto waqti uu ku daawado, dhageysto, ama u akhriyo sheeko, waxaa laga yaabaa inay si qoto dheer ugu hawlan yihiin astaantaada internetka. Laakiin waxaan ku doodi lahaa inay tani naadir tahay. Waxaanan aaminsanahay in tirakoobka warshadaha uu taageerayo ujeedadayda. Hal tusaale waa kobaca laba-godka ah iyo caan ka ahaanshaha (in ka yar 2-daqiiqo) fiidiyowyada "sida loo-sameeyo" ee khadka tooska ah looga isticmaalo. Dadku ma raadinayaan sheekooyin, waxay raadinayeen xalka dhibaatooyinkooda.
Ma dhahayo shirkadaada waa inay iska dhaaftaa sheekada gebi ahaanba. Markaan baaritaanka sameyno oo aan horumarino sheeko ku qancisa, joornaalada iyo waraaqaha cadcad ee aan ugu talagalnay macaamiisheenu waxay muujiyaan waxqabad muuqda. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa dad badan oo kale oo u imanaya kuna beddelaya boggaga macaamiisheena markaan bixinno xal lagu saxo dhibaatadooda.
In kasta oo qayb ka mid ah waxyaabahaagu ay tahay inay u sheegaan sheekada qasabka ah ee jiritaanka shirkaddaada, aasaasahaaga, ama macaamiisha aad caawineyso, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad haysato qoraallo kooban, oo cad oo la hadlaya:
Sida loo xaliyo dhibaatada.
Sida xalkaagu u caawinayo hagaajinta dhibaatada.
Muxuu xalkaagu uga duwan yahay.
Maxay tahay sababta laguugu aamini karo.
Sida ay macaamiishaadu qiil ugu heli karaan kharashkaaga.
Tusaalaha 1aad: Tech High, No Story
NIST waa kan Machadka Qaranka ee Heerarka iyo Tiknolojiyadda. Waxay si joogto ah u daabacaan warbixinno cilmi-baaris oo dhaadheer oo ku talinaya siyaasadaha iyo nidaamyada mawduucyada sida xakamaynta marin u helka, sii wadida ganacsiga, ka jawaab celinta dhacdada, dib u soo kabashada musiibada iyo meelo badan oo muhiim ah. PDF-yada ayaa si aan caadi aheyn u faahfaahsan (sida dukumiinti kasta oo rasmi ah oo cilmi baaris ah waa inay noqotaa), laakiin inta badan khubarada IT iyo Amniga waxay u baahan yihiin inay fahmaan waxyaabaha laga qaadayo - ma darsaan faahfaahin kasta.
Macaamiilkeenna, Xarumaha Macluumaadka Nolosha, waxaa si caalami ah loogu aqoonsan yahay inuu yahay hoggaamiye hal-abuur ku leh warshadaha xarunta xogta iyo khubaro xagga amniga ah. Xaqiiqdii, iyagu waa xarun xogeed gaar loo leeyahay oo gaadhay heerka ugu sarreeya ee shuruudaha amniga federaalka ee la yaqaan - FEDRamp. Aasaasaha aasaasaha Rich Banta waa mid ka mid ah khubarada ugu aqoonta badan adduunka. Marka, halkii dib looga cusbooneysiin lahaa dukumiintiyada oo dhan, Rich wuxuu ansixiyaa qoraal kooban oo ay baareen oo ay qoreen kooxdeena oo sharraxaysa warbixinta. Muunad - NIST 800-53.
Qiimaha maqaalladaas ayaa ah inay badbaadineyso rajadooda iyo macaamiishooda tan waqti ah. Iyada oo aqoonsiga hodanka uu dhistay, qeexitaankiisa cilmi baarista ayaa lagu kalsoon yahay oo ay qiimeeyaan dhagaystayaashiisa. Sheeko malahan… si hufan ayaan uga jawaabayaa waxaan rabaa inaan ogaado baahiyaha dhagaystayaashiisa.
Tusaale 2: Cilmi-baaris Qiimo Leh, Sheeko La'aan
Mid kale oo ka mid ah macaamiisheennu waa xalka ugu sarreeya ee xirfadlayaasha qorista si ay u wareystaan ​​musharrixiinta farriinta qoraalka, mataleysay. Waa tikniyoolajiyad cusub oo sidan oo kale ah in runtii aysan jirin cid raadineysa nooca noocan ah xilligan. Si kastaba ha noqotee, isla go'aan qaadayaasha ayaa raadinaya macluumaad kale khadka tooska ah. Waxaan ka caawinay kooxdooda cilmi baarista iyo soo saarista liistada qiimo jaban shaqaalaha kaas oo kobciya kaqeybgalka, haynta iyo dib ugu soo laabashada maalgashiga.
Mar labaad, sheeko halkaas kuma taal - laakiin waa maqaal si fiican loo baaray, dhammaystiran, oo qiimo leh oo ka jawaabaya Waxaan rabaa inaan sameeyo markay shaqo-bixiyeyaashu raadinayaan inay ku fuliyaan faa'iidooyin cusub shaqaalaha.
Waa maxay Raadintaada Raadinta?
Mar labaad, ma ixtiraamayo awoodda sheeko xariirka weyn, waxaan kaliya kula talinayaa inaysan ahayn aaladda kaliya ee ku jirta sanduuqaaga. Waxaad ubaahantahay inaad sooqaadato qalabka saxda ah ee rajada saxda ah. Jaantus waxa dhagaystayaashaadu raadinayaan oo u diyaari iyaga.
Had iyo jeer sheeko ma ahan.
Tags: qorista shiraacmacaashka shaqaalahafarsamada sarehrWaxaan rabaa inaan iibsadoWaxaan rabaa inaan sameeyoWaxaan rabaa inaan tagowaxaan rabaa inaan ogaadoxarumaha xogta noloshaqoristaStorysheeko
Cloudimage.io: Sawirro la keydiyay, la jarjaray, la xareeyay, ama Watermarked ahaan adeeg ahaan
Waad ku mahadsan tahay Douglas qoraal aad u macluumaad badan. Waan ogahay in Mawduucu yahay boqorka laakiin looma baahna inaad ku qanacdo waa inuu noqdaa 1000 + erey. Waxaan aaminsanahay in macluumaadkaaga ay tahay inay lahaadaan macluumaad gaar ah oo soo jiita martida. Dhirkuu doono ha lahaadee.
Jan 13, 2018 saacadu markay ahayd 10:25 PM
Gabi ahaanba ku raacsanahay - illaa xad. Way adagtahay in si buuxda wax looga qoro mowduuc adoon si faahfaahsan loo qorin. Waxaadna heli doontaa bogag aad uyar oo heer sare ah oo loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee la raadinayo markii la raadinayo wax soo saar ama adeeg ka hooseeya ereyada 1,000. Ma dhahayo waa sharci… laakiin waxaan dhihi lahaa in gebi ahaanba la dhammaystiro waa.